Du är här: Hem / Smittskydd & beredskap / Utbrott / Aktuella utbrott / Covid-19 / Om covid-19 på olika språk / Somaliska | Soomaali
Ilaali naftaada iyo ta dadka kale – talooyinka ku saabsan covid-19
Så skyddar du dig själv och andra mot att smittas av covid-19 på somaliska.
Halkan waxaa ku jirta soo koobid ah waxa ay tahay inaad ka fikirto si aad naftaada iyo dadka kaleba uga ilaaliso covid-19. Waxaa jira talooyin gaar ah oo loogu talagalay adiga ah qof aan la tallaalnayn.
Qaad mas'uuliyad si looga hortago faafitaanka cudur
Dadka oo dhan mas’uuliyad gaar ah ayaa ka saaran in laga hortago faafitaanka cudurrada faafa. Waa in aad naftirkaagu ka fikirtaa sida aad isaga ilaalin lahayd in lagu qaadsiiyo cudurkan iyo in aad qaadsiisid dadka kale.
Naftaada ku iaali tallaal
In la is tallaalo waa qaabka ugu fiican ee la isaga ilaalin karo cudur halis ah iyo faafitaanka covid-19.
Hey’adda caafimaadka dadweynaha waxay ku talinaysaa in dhammaan dadka ah 12 jir ama ka weyn ay iska tallaalaan covid-19.
Warbixin ku saabsan tallaalka: Waxa fiican in laga ogaado talaalkaaga ka hortaga covid-19
Bogga intarnatka ee 1177.se waxaad ka akhrin kartaa sida tallaalku uga dhaco isla meesha aad ku nooshahay: Sidan ayaad samaynasaa si aad isaga tallaasho ka hortaga covid-19 (1177.se)
Guriga joog is baar haddii aad hesho calaamadaha cudurka
Fiiro gaar ah u yeelo calaamadaha cusub ee soo baxa sida cuno xanuun, diif, xummad, qufac ama dareen in la buko.
Guriga joog haddii aad leedahay kuwaas ama calaamado kale oo ah caabuqa marinka neef mareenka.
Xitaa iska baar covid-19. Tani waxay khuseysaa adigaaga aan tallaalnayn iyo adigaaga tallaalan labadiinaba.
In guriga la joogo marka aad leedahay calaamado cudur waxay yareynaysaa faafitaanka covid-19 iyo caabuqyada kale sida hargabka xun iyo faayraska RS.
Guriga joog oo ka joog shaqada, iskoolka, dugsiga xanaanada iyo hawlaha kale marka aad leedahay calaamad ah caabuq marinka neefta ah xitaa haddii aad heshay jawaab baaritaan oo ah in aanad qabin covid-19. Taasi waxay yareynaysaa faafitaanka caabuqyada kale.
Wac telafoon lambarka 1177 haddii aad u baahantahay inaad hesho caawimaada dhinaca qiimeynta calaamadahaaga ama talo ku saabsan meesha aad ka raadsan karto daryeel caafimaad. Tani waxay khuseysaa gaar ahaan dadka ka tirsan koox khatar ku jirta kuwaas oo u baahan kara daryeelka xitaa cudurrada kale ee aa ahayn covid-19, sida tusaale ahaan hargabka xun.
Dhanka 1177.se waxaa ku jirta warbixin ku saabsan sida baaritaanku uga dhaco meesha aad ku nooshahay. Carruurta aan weli bilood fasalka barbaarinta iyo kuwa la caddeeyay inuu ku soo dhacay covid-19 nus sanadeedki ugu dambeeyay ma u baahni caadi ahaan inay is baaraan.
Dib ugu noqo marka baaritaankaaga waxba laga waayo ee aad caafimaado
Adigu waxaad dib ugu noqon kartaa dugsiga xanaanada, iskoolka, shaqada iyo hawlaha wakhti firaaqaha marka waxba lagaa waayo ee aad caafimaado. Haddii aad qandho lahayd, waa inaad bilaa qandho soo ahayd ugu yaraan hal maalin. Calaamadaha qaarkood ee dhinaca marinada neefta way ku sii harsanaan karaan qofka caafimaaday muddo wakhti ah ka dib caabuqan.
Inta ay leegtahay wakhtiga aad u baahantahay inaad guriga joogto waa wax qof walba gaar u ah. Dadka qaarkood waxay ahaan kartaa laba-saddex maalmood halka dadka kalena ay tahay qiyaastii hal toddobaad ama ka dheer. Iyadoo taageero laga dhiganayo talooyinkan ayaad u baahantay in aad keligaa qiimeyso marka aad caafimaado ee aad dib ugu noqon karto hawlahaaga maalinlaha ee caadiga ah.
Haddii baaritaanku soo saaro inaad qabto covid-19 waxaa ku khuseeya talooyin kale.
Ka fikir inay jiri karaan go’aamo goboleed gaar ah kuwaas oo dhammaystir u ah Hey’adda caafimaadka dadweynaha talooyinkeeda.
Guriga joog haddii qof ka tirsan gurigaaga uu qaado covid-19
Haddii qof aad la nooshahay uu ku dhaco covid-19 waxaad u baahantahay in xitaa adiguna aad joogto guriga. Samee sidan:
Guriga joog ilaa toddoba maalmood lagana soo xisaabinayo maalintii qofkaas ka tirsan gurigaaga uu iska qaaday baaritaankiisa. Tani waxay khuseysaa adigaaga tallaalan iyo adigaaga aan tallaalnayn labadiinaba iyo xitaa haddii adigu aanad lahayn wax ah calaamadaha cudurka. Xitaa carruurta aan bilaabin fasalka barbaarinta waxaa looga baahanyahay inay joogaan guriga.
Is baar sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah haddii aad leedahay calaamado cudur.
Is baar shan maalmood ka dib haddii aanad lahayn calaamado cudur. Shantaas maalmood waxaa loo xisaabinayaa laga bilaabo maalintii qofkaas ka tirsan gurigaaga baaritaankiisa laga helay cudurkan. Carruurta aan weli bilaabin fasalka barbaarinta ma loo baahna in la baaro, laakiin waa inay joogaan guriga.
Haddii jawaabta baaritaanka soo saarto in aanay waxba jirin oo aanad helin wax calaamad cudur ah waxaad dib ugu noqon kartaa iskoolka, shaqo iyo hawlaha kale toddobo maalmood ka dib marka qofkaas aad ka tirsan gurigaaga laga helay cudurkan. Sii wad inaad u feejignaato calaamado cusub oo soo baxa.
Dadka la caddeeyay inuu ku soo dhacay covid-19 nus sanadeedki ugu dambeeyay ma u baahni inay is baaraan ama guriga joogaan haddii qof ay iyagu la noolyihiin laga helo covid-19. Iyagu laakiinse waxay u baahanyihiin inay guriga joogaan haddii ay helaan calaamado cudur oo cusub.
Talooyinka gaarka ah ee ku saabsan in masaafo ahaan la kala durko waxay khuseeyaan adigaaga aan tallaalnayn
Si aad ah uga taxadar inaad naftaada iyo dadka kaleba ka ilaaliso inay qaadaan caabuqa haddii aad tahay qof weyn oo aan la tallaalin. Tani waxay khuseysaa xitaa marka aadan lahayn astaamo.
Hay’adda caafimaadka dadweynaha waxay leedahay talo guud oo ah in dadka waaweyn ee is tallaali kara, laakiin aan weli sidaa samayn, looga baahan yahay inay tixgelin gaar ah siiyaan dadka ka tirsan kooxaha khatarta ku jira iyo dadka ka weyn 70 jir.
Tani waxaad ku samaynaysaa adiga oo masaafo ahaan ka durkaya dadka kale marka ay sidaasi tahay suurtagal, iyo gaar ahaan in la iska ilaaliyo xiriirka lala leeyahay dadka ka tirsan kooxaha khatarta ku jira iyo kuwa ah 70 jir iyo ka weyn.
Masaafo ahaan ka durug dadka kale ee jooga goobtaada shaqada marka ay sidaasi tahay suurtagal oo iska ilaali meelaha ciriiriga ah, tusaale ahaan xafladaha muusiga, meelaha lagu caweeyo habeenkii iyo xafladaha waaweyn.
Samee sidan haddii baaritaankaagu soo saaray inaad qabto covid-19
Haddii baaritaankaagu soo saaro inaad qabto covid-19 waa inaad guriga joogto oo aad raacdo xeerarka lagu dhaqmayo ee qofka qaba covid-19.
Waxaad dib ugu noqon kartaa dugsiga xanaanada, iskoolka, shaqada iyo hawlaha wakhti firaaqaha haddii aad joogtay guriga ugu yaraan toddoba maalmood laga soo bilaabo markii calaamaduhu bilaabmeen oo aad soo ahayd bilaa xummad labadii maalmood ee ugu dambeeyay isla markaana aad dareemayso caafimaad qab. Calaamadaha qaarkood ee dhinaca marinada neefta way ku sii harsanaan karaan qofka caafimaaday muddo wakhti ah ka dib caabuqan.
La xiriir 1177 haddii aanad hubin inaad u baahan tahay daryeel caafimaad iyo daaweyn aad u hesho calaamadahaaga. Haddii ay jirto xaalad nolosha khatar ku ah wac 112.
Akhri wixi dheeraad ah
Kuna saabsan covid-19, tallaalka iyo baaritaanka oo ku qoran luqaddo kala duwan
Tallaalka looga hortago cudurka [Covid-19]
Filmen nedan, titel på svenska: Frågor och svar om vaccination mot covid-19
Su'aalo iyo jawaabo ku saabsan tallaalka ka hortagga covid-19
Filmen nedan, titel på svenska: Sant och falskt om vacciner mot covid-19
Run iyo been ku saabsan tallaalada covid-19:ka
Filmen nedan, titel på svenska: Det är viktigt att vaccinera sig
Waa muhiim inaad is tallaasho
Filmen nedan, titel på svenska: Om graviditet och fertilitet
Uurka iyo suurtogalnimada dhalista carruur
Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19?
Sidee loo baaraa talaalada ka hortaga covid-19?
Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin?
Sidee talaalada u shaqeeyaan?
Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin?
Waa maxay tallaal?
Filmen nedan, titel på svenska: Nu pågår vaccination mot covid-19
Iminka waxaa socda tallaal ka dhan ah covid-19
Shaybaar lagu shaac-bixiyo haddii imminka aad u xannuunsan tahay cudurka [Covid-19] ama u berri hore kugu dhacay
Iska baar covid-19 (PDF, 200 kB)
Ku socota adigaaga is tallaali doona – Ku saabsan tallaalka ka hortaga covid-19 (PDF, 174 kB)
Kugu socota adigaaga aan haysan aqoonsi Iswiidhish ah Ku saabsan tallaalka ka dhanka ah covid-19 (PDF, 184 kB)
Tallaalka cudurka [Covid-19] looga hortago qofka is-tallaalay oo loogu talagalay ilmaha 12 sano jirka ah ama ka wayn (PDF, 131 kB)
Wax ay fiicantahay in laga ogaado tallaalka ka dhanka ah covid-19 – loogu tala galay adigaaga ah carruur, dhallinyaro ama waalid (PDF, 583 kB)
Ku saabsan tallaalka ka hortaga covid-19 adigaaga uurka leh (PDF, 206 kB)
Warbixin ku saabsan cudurka [Covid-19] oo dumarka uurka leh loogu talagalay (PDF, 193 kB)
Haweenka uurka leh iyo tallaalka covid-19 (PDF, 149 kB)
Qaado tallaalka si loo yareeyo faafitaanka caabuqa (PDF, 577 kB)
Waxyaalahan ayaa khuseeya tallaalka fayruska Korona (PDF, 229 kB)
Covid-19 iyo kooxaha khatarta ku jira (PDF, 112 kB)
Sidan ayaad u isticmaalaysaa daboolka afka iyo sanka ee hal mar la isticmaalo (PDF, 2,4 MB)
Khad taleefan oo qaran oo ku aaddan fayruska corona oo luqada badan ah (PDF, 102 kB)